म्यानमारमा सैनिक ‘कू’ विरुद्ध ब्यापक जनप्रदर्शन, गोली लागेर सातको मृत्यु ! « MNTVONLINE.COM
एजेन्सी । सैनिक शासनविरुद्ध म्यानमारमा जनप्रदर्शन ब्यापक बन्दै गएको छ । जारी जनप्रदर्शन दबाउन सेनाले गोली चलाउँदा सात प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको छ ।
आइतबार सडकमा उर्लिएको जनसागरलाई तितरवितर पार्न सेनाले गोली चलाएको थियो । कैयौं घाइते बनेका छन् । अहिले म्यानमारको अवस्था तनावग्रस्त बनेको छ ।
सेनाको ‘कू’ पछि म्यानमारमा सेनाविरुद्ध जनप्रदर्शन हुँदै आएको छ । सत्ताविरुद्ध जनता सडकमा उर्लिने क्रम बढेपछि सेनाले आन्दोलन दबाउन बल प्रयोग गरिरहेको छ । गत साता सेनाको गोली लागेर दुई प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको थियो ।
नेतृ आङ सान सू चीलाई रिहा गर्न र सत्ता फिर्ता गर्न माग गर्दै सेनाविरुद्ध हरेक दिन प्रदर्शन हुँदै आएको छ । म्यानमारको ठूलो शहर रंगुनसहित विभिन्न शहरमा हरेक दिन विशाल जनप्रदर्शन भइरहेका छन् । जनप्रदर्शनमा सहभागीता बढ्न थालेपछि सेनाले आक्रामक रुपमा दबाउने प्रयास गरिरहेको छ ।
प्रदर्शनकारीलाई तितरवितर पार्न सेना र प्रहरीले पानीको फोहोर फ्याक्नुका साथै रबरको गोली प्रहार गरेका छन् । म्यानमारमा गत नोभेम्बरमा सम्पन्न निर्वाचनमा आन सान सू चीको पार्टीले बहुमत प्राप्त गरेपछि चुनावमा धाँधली भएको भन्दै सेनाले फेब्रुअरी १ मा सू ची नेतृत्वको सरकार अपदस्थ गरी सत्ता कब्जा गरेको थियो । साथै एक वर्षका लागि संकटकाल घोषणा गरेको छ ।
सू ची सहित अरु थुप्रै नेताहरुलाई सेनाले अझै नियन्त्रणमा लिएको छ । साथै रिहा गर्ने कुनै संकेत देखाएको छैन । सेनाको यस्तो कदमप्रति अमेरिका, युरोपेली युनियन सहित थुप्रै देशले विरोध जनाएका छन् ।
महोत्तरीमा बोक्सीको आरोपमा निर्घात कुटपिट !
जलेश्वर । बोक्सीको आरोपमा मुस्लिम समुदायकी एक महिलामाथि निर्घात कुटपिट भएको छ । महोत्तरीको मनरासिस्वा नगरपालिका–५ कटैयाका मोजिबुल रहमानकी ५० वर्षीया पत्नी गुल्शन खातुन बोक्सीको
नेपाल लगानीका लागि सुगम गन्तव्यः अर्थमन्त्री पौडेल !
कोरोना बढेपछि सरकारले दियो यस्तो आदेश !
इन्धनको मूल्य बढेसँगै हवाई भाडा पनि बढ्यो, यस्तो छ नयाँ भाडादर !
भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई कोरोना संक्रमण !
रसियाद्वारा चेक रिपब्लिकका २० जना कुटनीतिज्ञ निष्काशित
ब्राजिलमा कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन १ हजार ६५७ जनाको मृत्यु
७ जना पाकिस्तानी प्रहरी इस्लामीक पार्टीका समर्थकहरूको कब्जामा
जापानद्वारा फाइजरलाई थप खोप आपूर्तिको लागि आग्रह !
इजिप्टमा रेल दुर्घटनाः ११ जनाको मृत्यु, ९८ घाइते !